Alnico Magnet Material, China Alnico Magnet Material Abavelisi, abaxhasi, Umzi mveliso - QIANGSHENG MAGNETS CO., LTD
Izinto zeAlnico Magnet
Izinto zeAlnico (eyakhiwe ubukhulu becala ngealuminium, inikel, kunye necobalt ngamanani amancinci ezinye izinto kubandakanya titanium kunye nobhedu) mvume zoyilo ezinikezela ngemiboniso ephezulu, amandla aphezulu kunye nokuqina okuphezulu. Iimagnethi zeAlnico zibonakaliswa ngozinzo lobushushu obugqwesileyo kunye nokumelana okuhle nedemagnetization ukushukuma kunye nokothuka. Iimagnethi zeAlnico zibonelela ngeyona nto iphambili kubushushu bayo nayiphi na imveliso yemagnethi esemgangathweni ekhoyo. Zingasetyenziselwa izicelo zomsebenzi oqhubekayo apho amaqondo obushushu agqithisileyo ukuya kuthi ga kwi-930F anokulindelwa.
Iimagnethi zeAlnico zenziwe ngenkqubo yokuphosa okanye yokuntywila. Imagnethi yeAlnico inzima kakhulu kwaye iyabukeka. Machining okanye ukubhola ayikwazi ke ukuba kwenziwe ngeendlela eziqhelekileyo. Imingxunya ihlala igcinwe kwindawo ekufunyanwa kuyo iziseko. Iimagnethi ziphoswa okanye zenziwe sintered ngokusondeleleneyo kangangoko kubungakanani obufunekayo ukuze ukugaya okungafunekiyo ukugqiba ubungakanani kunye nokunyamezelana kuncitshiswe
Iindlela ezizodwa zokuphosa ezisetyenziselwa ukufezekisa ingqokelela yekristalline yokuqhelaniswa nokutya efumaneka kwi-alnico 5 kunye ne-8 kumabanga. La manqanaba e-anisotropic ayilelwe ukuvelisa imveliso ephezulu yemagnethi kwicala elichaziweyo. Ukuqhelaniswa kufezekiswa ngexesha lonyango lobushushu, ngokupholisa ukulahla ukusuka ku-2000F kwinqanaba elilawulwayo ngaphakathi kumazibuthe ohambelana nolwalathiso olukhethiweyo lokwenza umazibuthe. I-Alnico 5 kunye ne-Alnico 8 zi-anisotropic kwaye zibonisa umkhombandlela okhethiweyo wokuqhelaniswa, ukuqhelaniswa kweMagnetic kufuneka kuchazwe kumzobo wakho xa uthumela iodolo kuthi.
I-Cast Alnico 5 yeyona isetyenziswa ngokuxhaphakileyo kuyo yonke i-Alnico's .Idibanisa izikhombisi eziphezulu ngemveliso yamandla ephezulu ye-5 MGOe okanye nangaphezulu kwaye isetyenziswa kakhulu kumatshini wokujikeleza, unxibelelwano, iimitha kunye nezixhobo, izixhobo zokubona kunye nokubamba usetyenziso. Ukuxhathisa okuphezulu kwi-demagnetization (amandla anyanzelekileyo) e-Alnico 8, umxholo we-cobalt ukuya kwi-35%, ivumela le nto ukuba isebenze kakuhle kubude obufutshane okanye kubude ukuya kububanzi beerandi ezingaphantsi kwe-2 ukuya kwi-1.
Izinto ze-Sintered Alnico zibonelela ngeepropathi ezincinci ezibabazekayo kodwa iimpawu zebhotolo zoomatshini kunezixhobo zeAlnico. Iimagnethi zeSintered Alnico zifaneleke kakhulu kubungakanani obuncinci (ngaphantsi kwe-1 oz.) Kule nkqubo. Umxube onqwenelekayo we-powder yensimbi ucinezelwe ukuba ubume kunye nobungakanani kwi-die, emva koko sintered kwi-2300 F kumoya we-hydrogen. Inkqubo yokuntywila ilungile kwimveliso yevolumu enkulu, kwaye ikhokelela kumacandelo omelele ngokwendlela kuneemagnethi eziphosiweyo. Ukunyamezelana ngokuthe ngqo kunokufikelelwa ngaphandle kokugaya.
Iimpawu zeAlnico Magnet:
* Utshintsho oluncinci kwiipropathi zemagnethi ukuya kubushushu
* Ubushushu obusebenzayo obuphezulu bunokuphakama njenge-450oC ~ 550oC.
* Amandla anyanzelekileyo asezantsi.
* Strong nokumelana amandla, akukho ukutyabeka efunekayo ukuze ukhuseleko komhlaba.
• Ifanele iimagnethi ezincinci ezinemilo entsonkothileyo
• Icwecwe elibumbeneyo, ubungqongqo obuphezulu
• Ubume obuqhelekileyo, ubungakanani bokuchaneka
Nditsho nezinto, ukusebenza okuzinzileyo
• Ilungele umazibuthe odibeneyo
Uzinzo lobushushu obugqwesileyo (ukungalingani kwe-br yeyona nto incinci kuzo zonke ezinye iimagnethi ezisisigxina
Iimpawu zeMagnetic and Physical zeCast Alnico Magnet
kwiBanga Udidi olulinganayo lweMMPA Ubungakanani Ukunyanzelwa Ubuninzi beMveliso yaMandla mninzi Itempu eguqukayo. Ulungelelwaniso Itempu eguqukayo. Ulungelelwaniso Ixesha leCurie. Temp. Ulungelelwaniso ongenazi-
Br Hcb (BH) ubuninzi g / cm3 α （Br） cy （Hcj） TC TW
I-LNG52 I-ALNIC05DG 1300 13000 56 700 52 6.5 7.3 -0.02 + 0.02 850 525
Iimpawu zeMagnetic and Physical zeSintered Alnico Magnet
kumaBakala Udidi olulinganayo lweMMPA Ubungakanani Ukunyanzelwa Ukunyanzelwa Ubuninzi beMveliso yaMandla mninzi Itempu eguqukayo. Ulungelelwaniso Ixesha leCurie. Temp. Ulungelelwaniso ongenazi-
Br Hcj Hcb (BH) ubuninzi g / cm3 α （Br） TC TW
I-SLN8 Alnico3 520 5200 43 540 40 500 8-10 1.0-1.25 6.8 -0.02 760 450 Isotropy
I-SLNG12 Alnico2 700 7000 43 540 40 500 12-14 1.5-1.75 7.0 -0.014 810 450
I-SLNGT18 Alnico8 600 6000 107 1350 95 1200 18-22 2.25-2.75 7.2 -0.02 850 550
I-SLNGT28 Alnico6 1000 10000 57 710 56 700 28-30 3.5-3.8 7.2 -0.02 850 525 Anisotropy
I-SLNG34 Alnico5 1100 11000 51 640 50 630 34-38 3.5-4.15 7.2 -0.016 890 525
I-SLNGT31 Alnico8 780 7800 106 1130 104 1300 33-36 3.9-4.5 7.2 -0.02 850 550
I-SLNGT38 800 8000 126 1580 123 1550 38-42 4.75-5.3 7.2 -0.02 850 550
I-SLNGT42 880 8800 122 1530 120 1500 42-48 5.3-6.0 7.25 -0.02 850 550
I-SLNGT38J Alnico8HC 730 7300 163 2050 151 1900 38-40 4.75-5.0 7.2 -0.02 850 550